Casa Tata 3 - I-Airbnb
SikwiSiqithi saseChacahua. ICasa tata ikude ngokwaneleyo kwidolophu yaseChacahua ukuze ufumane uxolo kulwandle lwethu lwabucala, vuka kwangethuba, ubaleke okanye wenze i-yoga kwaye wonwabele ukuphuma kwelanga okubalaseleyo uya kuze ukubone.
Chitha imini ufunda incwadi kwii-hammocks zethu ezintle okanye usebenze kule projekthi ubuyibekela bucala kwisixeko esixakekileyo kwitafile yakho yabucala ngaphandle kwekhabhathi yakho.
Sibekwe kufutshane nedolophu yaseChacahua ukuze ukwazi ukusefa, ukonwabele ibhiya okanye i-mezcal kwenye ibha, uye kuloba ekuseni okanye ukukhwela inqanawa e-laguna ukutshona kwelanga, emva koko ubuyele ekhaya kwikhabhathi yakho epholileyo entliziyweni. kwipaki yesizwe yaseChacahua.
Ukutya isidlo sangokuhlwa ungaya kwindawo yethu yokutyela esiyithandayo eChacahua ekumgama nje wemizuzu embalwa uhambe elunxwemeni.
4.79 · Izimvo eziyi-53
Sincoma kakhulu ukuba uhambe ebusuku ukuze ubone iinkwenkwezi kwisikhephe kwaye uqubhe kwi-laguna efudumeleyo. Ukuba akukho kukhanya kwenyanga umzimba wakho uya kukhanya kwi-bioluminescence. Ufuna ngokwenene ukufumana oku kanye kanye ebomini bakho.
Sinesikhephe kunye nomntu onokukuthatha ubone le nto imangalisayo yendalo ebusuku okanye uye kubona amahlengesi kunye nofudo ngexesha lasemini.
Sincoma kakhulu ukuba uhambe ebusuku ukuze ubone iinkwenkwezi kwisikhephe kwaye uqubhe kwi-laguna efudumeleyo. Ukuba akukho kukhanya kwenyanga umzimba wakho uya kukhanya kwi-biolum…